[Review] Top 6 Tinh dầu dưỡng tóc uốn nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 Tinh dầu dưỡng tóc uốn nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ubuwazi ukuthi izinwele zakho ezisontekile zizoba zinhle kakhulu, zicwebezele futhi zibe-bouncy uma usebenzisa amafutha ezinwele engeziwe? Lokhu kungenye yezeluleko ezinhle kakhulu ezidluliselwa ngabalungisi bezinwele nodade. Ngakho ayini ngempela amafutha ezinwele ze-perm? Kungani izinwele ezigobile kufanele zisebenzise amafutha ezinwele? Futhi kukhona imikhiqizo amafutha ezinwele ze-perm Okungcono kakhulu namuhla. Thola ngokubuyekezwa kwe-Phong esihlokweni esingezansi!
1 Iyini i-perm hair oil?
2 Isizathu sokuthi izinwele ezigobile zidinga ukusebenzisa amafutha ezinwele
3 Amafutha angu-6 ahamba phambili ezinwele ze-perm namuhla
3.1 1. I-L’uadais Classic yamafutha okugoqa
3.2 2. I-Nashi Argan Curly Hair Oil
3.3 3. Amafutha e-curling e-Rohto Megumi
3.4 4. I-Macadamia Curling Amafutha
3.5 5. Iresiphi Yezinwele Zami Ezingenayo I-Innisfree Iserum Yamafutha Ezinwele Ezomile
3.6 6. L’oreal Mythic oil perm oil
4 Imiyalo yokuthi ungasebenzisa kanjani amafutha abalulekile ezinwele ezigoqayo ngempumelelo
Iyini i-perm hair oil?
Amafutha ezinwele ezigobile umkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele, okwazi ukwelapha, ukondla kanye nokwenza ngcono impilo yezinwele eziye zabhekana nenqubo ye-perm. Amafutha ezinwele ze-curling akhishwe ngokuphelele emakhambi emvelo. Ayiqukethe amakhemikhali ayingozi kanye nezakhi eziku-conditioner azigcini nje ukugqoka ungqimba lwangaphandle lwezinwele, kodwa futhi zingena ngaphakathi ngaphakathi. Isiza ukugcina izinwele zibushelelezi, zinempilo futhi igwema ukungqubuzana lapho wenza isitayela noma ugoqa.
Amafutha okugoqa izinwele umugqa womkhiqizo okwazi ukunakekela nokondla izinwele eziqinile kusuka ekujuleni ngaphakathi, ulethe izinwele ezibushelelezi, ezicwebezelayo ngokwemvelo.
Ngaphandle kwalokho, amafutha ezinwele azosiza ukugcoba izinwele futhi engeze ama-fatty acids esikhundleni samafutha alahlekile ku-cuticle yezinwele ezigoqayo. Lokhu kuzosiza ukuvimbela i-frizz futhi kunciphise ngempumelelo ukulahlekelwa izinwele.
Isizathu sokuthi izinwele ezigobile zidinga ukusebenzisa amafutha ezinwele
Izinwele ezigobile zidinga ukusebenzisa amafutha ezinwele njalo, ngoba amafutha ezinwele aletha ukusetshenziswa okuhle kwezinwele ngale ndlela elandelayo:
Isiza ukugcina ama-curls isikhathi eside
Khulisa ukushuba kwe-shaft yezinwele, kusiza izinwele ukuthi zihlale ziqinile futhi ziqine ngokwemvelo.
Thuthukisa umswakama wezinwele ezigoqene, ezicindezelwe, wenze izinwele zicwebezele futhi zibushelelezi.
I-Anti-oxidant futhi ikhawulela i-frizz
Nakekela izinwele ezinde ngokushesha
Vimbela ngempumelelo ukulahleka kwezinwele.
Ngakho-ke, ngalesi sigaba, usuvele uyasazi isizathu sokuthi kungani izinwele ezivunyelwe zidinga ukusebenzisa amafutha ezinwele, akunjalo? Ake sibhekisele esigabeni esilandelayo ukuze sibambe amafutha ezinwele ezi-perm angu-6 aphezulu namuhla!
Amafutha angu-6 ahamba phambili ezinwele ze-perm namuhla
Amafutha abalulekile ezinwele ezigoqayo angumugqa womkhiqizo odumile kulezi zinsuku. Lo mugqa womkhiqizo uhlukile ngokwemikhiqizo, izithako, ukusetshenziswa kanye nokwakheka. Ngakho-ke, abesifazane abaningi basazibuza ukuthi yimaphi amafutha abalulekile ezinwele ze-perm angcono kakhulu. Ngaphandle kokuvumela ukuthi ukhathazeke lapho ukhetha uwoyela wezinwele, Ukubuyekezwa kwe-Phong kuzokwembulela okungu-6 okuphezulu amafutha ezinwele ze-perm Okuhamba phambili kwanamuhla, okuhlanganisa:
1. I-L’uadais Classic yamafutha okugoqa
Umkhiqizo wokuqala kawoyela obalulekile u-Phong Reviews angathanda ukukwethulela wona yi-L’uadais Classic. Lona umugqa womkhiqizo okwamanje odumile futhi owethenjwa ezikhathini zamuva ngenxa yekhwalithi yawo enhle nemiphumela evelele yokunakekelwa kwezinwele.
Amafutha e-perm e-L’uadais Classic anomphumela wokungena ngokushesha ezinweleni futhi agcwalise izimbobo ezilimele ngaphakathi. Okufanayo nobuso bezinwele ezigoqayo, okwenza izinwele zihlale zibushelelezi, zicwebezela futhi ziqine kancane kancane.
Umkhiqizo uklanyelwe ngokukhethekile ukwelapha iziphetho ezomile, eziqhaqhazelayo nezihlukene ngenxa yokuvuma, ukudaya nokuqondisa. I-L’uadais Classic iwuwoyela obalulekile ondlayo futhi wengeza imisoco ebalulekile ezinweleni, esiza ukubuyisela izinwele ezilimele, ukulinganisa i-pH kanye nokuthambisa izinwele ngokuphumelelayo.
Amafutha ezinwele ze-L’uais Classic akhishwa kumavithamini nama-mineral acids, okusiza ukungena ngokushesha izakhi ezijulile emgodleni wezinwele. Uma isetshenziswa, ayibangeli ukunamathela nokwahlukana.
Uma usebenzisa i-L’uadais Classic njalo, isiza nezinwele zakho ezivunyelwe ukuthi zicwebezele futhi zithambe. Akukhona lokho kuphela, lawa mafutha abalulekile futhi anekhono elihle kakhulu lokuthambisa, elifaneleka kakhulu ukuthi ulisebenzise ebusika obomile.
Intengo yesithenjwa: 450,000 VND/ 50ml.
2. I-Nashi Argan Curly Hair Oil
I-Nashi argan hair conditioner Lona umkhiqizo wenkampani i-Argan. Umkhiqizo unesithako esiyinhloko se-organic Argan extract, isitshalo esitholakala eningizimu-ntshonalanga yeMorocco kuphela, esikwazi ukunakekela nokondla izinwele ngendlela ephumelela kakhulu.
Uma ungumthandi wokunakekelwa kwezinwele zemvelo ngokuphelele kanye nemikhiqizo yokuvikela, kufanele ukuthi uzwile izikhathi eziningi mayelana nokusetshenziswa okukhulu kwamafutha e-Nashi Argan ezinwele ezigoqayo. Kusukela emandleni okuthambisa, vikela izinwele ezigoqekile emiphumeleni eyingozi yemisebe ye-UV kanye nokuthuthukisa izithako ezisebenzayo ze-antioxidant. Ukusiza ukuqinisa izinwele, khulisa ukukhanya kwezinwele kusuka ekujuleni kwangaphakathi.
I-Nashi Argan Hair Oil iqukethe inani elikhulu lezakhi ezihlanganisa uvithamini E nama-fatty acids. Basiza ukukhuthaza ukukhula kwemvelo kwezinwele, ukukunikeza izinwele ezinempilo, eziqinile.
Intengo yesithenjwa: 270,000 VND/30ml kanye ne-550,000 VND/100ml.
3. Amafutha e-curling e-Rohto Megumi
I-Rohto Megumi iwumugqa wemikhiqizo esiza ukuvimbela ukulahlekelwa izinwele kwenkampani yaseJapane i-Rohto-Mentholatum. Iletha ikhono lokunakekela izinwele kusuka ekujuleni okusebenzayo futhi okuhlaba umxhwele. Umkhiqizo usiza futhi ukuvimbela ukulahleka kwezinwele kusuka empandeni kuya kwesinye, kuyilapho usiza ukusekela izinwele zakho ukuba zikhule futhi zilingane.
I-Rohto Megumi curling oil ikhishwa ezingxenyeni zemvelo ezifana ne: Ginseng Root, Brown Algae Extract, Ginger Root, Japanese Tea Tree, Lien Wood, Collaplus … ukusiza ukunikeza zonke izakhi ezidingekayo zezinwele. Ukusuka lapho, kuyasiza ukuthuthukisa umsoco we-scalp futhi kuqinise imicu yezinwele. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukukhuthaza ukukhula kwezinwele, ukwandisa isigaba sokukhula kanye nokwandisa ukushuba kwezinwele ngempumelelo.
Ngaphandle kwalokho, imikhiqizo evela eJapan ihlala iqinisekisa ukuphepha. Ngoba aziqukethe izithako ezibangela ukucasuka kokubili izinwele nasekhanda. Ngakho-ke, ungaqiniseka ngokuphelele lapho uyisebenzisa ukuze unakekele izinwele zakho eziyigugu nsuku zonke.
Intengo yesithenjwa: 195,000 VND/ 50ml.
4. I-Macadamia Curling Amafutha
I-conditioner yezinwele elandelayo esebenzayo u-Phong Reviews angathanda ukukwazisa yona yi-Macadamia. Lona okwamanje umkhiqizo okalwe kakhulu ngenxa yekhono lawo lokuthambisa kahle nokuvikela izinwele.
I-Macadamia Curling Amafutha Ikhishwa ngokuphelele emvelweni njengamantongomane e-macadamia namafutha e-argan. Umkhiqizo unikeza ikhono lokondla ngokujulile futhi ubuyisele izinwele kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle, ukuvuselela ukuthungwa kwezinwele ngempumelelo kakhulu.
I-Natural Macadamia Oil, iqukethe inani eliphakeme kakhulu le-Omega 7 kunoma yimuphi uwoyela wembewu. Ngenxa yalokho, inikeza ikhono eliphelele lokuswakama futhi ayibangeli umuzwa onamafutha uma isetshenziswa. Kuhlanganiswe ne-Argan oil extract, uwoyela weMacadamia uzosiza ukuthuthukisa impilo yezinwele ezivunyelwe, ezidayiwe, unciphise umonakalo futhi ubuyisele ukukhanya okudingekayo. Umkhiqizo uqinisekisiwe ukuthi uphephile kuzo zonke izinhlobo zezinwele, ezingenagluten, ezingena paraben futhi ezingenabo ubuthi.
Intengo yesithenjwa: 899,000 VND/ 125ml.
5. Iresiphi Yezinwele Zami Ezingenayo I-Innisfree Iserum Yamafutha Ezinwele Ezomile
I-Innisfree Iresiphi Yezinwele Zami Iserum Yamafutha Omswakama Ezinwele Ezomile ingumkhiqizo kawoyela obalulekile othandwa futhi ofunwa abantu abaningi besifazane emakethe namuhla. Futhi lona ngumkhiqizo odayiswa kakhulu we-Innisfree.
Ivela kumkhiqizo wezimonyo waseKorea odumile i-Innisfree, I-Innisfree Iresiphi Yezinwele Zami Iresiphi Iserum Yamafutha Omswakama Ngezinwele ezomile inikeza ukubuyisela okuphumelelayo kwezinwele zezinwele ezomile nezilimele. Ngezithako ezikhishwe kubhontshisi wesoya kaJeju, umkhiqizo usiza ukuhlinzeka ngomthombo wemvelo wamaprotheni, okwandisa ukuqina nokukhanya kwezinwele zakho.
Ngokuhambisana nalokho amaqabunga etiye ahlanganiswe namafutha abalulekile embali ukusiza ukukhulisa umswakama, ukondla nokuvikela izinwele zakho ezivunyelwe ngendlela ebanzi. Sebenzisa I-Innisfree Iresiphi Yezinwele Zami Iseramu Yamafutha Omswakama Ezinweleni ezomile njalo, uzothola izinwele zakho zicwebezela, zinempilo, zigoqe ngaphandle kokunamafutha noma zingakhululeki.
Intengo yesithenjwa: 299,000 VND/ 70ml.
6. L’oreal Mythic oil perm oil
I-L’oreal Mythic oil iwumugqa wamafutha abalulekile ezinwele ezigoqayo ezineziqephu zemvelo ngokuphelele, ikakhulukazi ezingacasuli futhi ezinamathelayo uma zisetshenziswa. Umkhiqizo njengamanje waziswa kakhulu ngokunakekelwa kwezinwele okusebenzayo kanye nomphumela wokuthambisa. Lona futhi umugqa womkhiqizo othandwa abesifazane abaningi namuhla.
I-L’oreal Mythic Oil Perm Oil ine-extract yemvelo ngokuphelele evela kukwatapheya nembewu yamagilebhisi. Kuyasiza ukwengeza imisoco eminingi ebalulekile ezinweleni okuhlanganisa: Vitamin E, Omega 3, 6, 9 kanye namaFatty Acids. Lezi zakhi zomsoco zinemiphumela ye-antioxidant, zisiza ukubambezela inqubo yokuguga kwezinwele futhi zibe nekhono lokubamba ama-curls ngempumelelo kakhulu.
Ngaphezu kokunakekelwa kwezinwele okuphelele, I-L’oreal Mythic Amafutha Iphinde isebenze kakhulu ekusekeleni isitayela sezinwele. Ikhulisa ukukhanya nokushelela njengesengezo sansuku zonke. Abalungisa izinwele nabo basebenzisa lo mkhiqizo njengamafutha ayisisekelo axutshwe nama-curlers, amadayi ezinwele. Lokhu kuzosiza izinwele zakho zihlale zithambile, zicwebezela futhi zinempilo ngemuva kwe-perm, idayi.
Intengo yesithenjwa: 400,000 VND/190ml.
Imiyalo yokuthi ungasebenzisa kanjani amafutha abalulekile ezinwele ezigoqayo ngempumelelo
Amantombazane amaningi athanda ama-curls ama-bouncy, ikakhulukazi ama-curls ekugcineni. Nokho, akuwona wonke umuntu onesibindi sokuhlukanisa lezi zinwele. Imvamisa, uma izinwele ezigoqekile zinganakekelwa kahle, kuzoba nezimo ezi-2 ezifana nalezi:
Izinwele ziyancipha kancane kancane, azibambi i-buoyancy. Ngemva kwesikhashana, iziphetho zezinwele kancane kancane ziqonde.
Izinwele zisagoqekile kodwa zishwaqene ngendlela engafanele. Kuleli qophelo, izinwele zakho ezigoqekile zifana “nesidleke segwababa”.
Ngakho-ke, kufanele usebenzise amafutha abalulekile ezinwele ezigoqayo ukuze ukwazi ukwenza isitayela ngokunganaki ngezinwele ezigobile. Amafutha ezinwele azosiza izinwele zezinwele zihlale endaweni isikhathi eside, ziqine kakhulu.
Ukusebenzisa amafutha ezinwele ze-perm ngempumelelo:
Isinyathelo 1: Geza izinwele zakho nge-shampoo ekhethekile kanye ne-conditioner njengenjwayelo. Bese usebenzisa ithawula elomile elithambile ukuze womise ngobumnene izinwele zakho.
Isinyathelo sesi-2: Lapho izinwele zimanzi kancane, qhubeka nokusebenzisa amafutha ezinwele ezinweleni.
Isinyathelo sesi-3: Linda cishe imizuzu engu-2-3 bese usebenzisa amafutha abalulekile kancane ekugcineni kwezinwele zakho. Sebenzisa ikamu lezinyo elibanzi ukuze uxube izinwele ngobumnene ukuze usize amafutha angene ngokulinganayo ezinweleni.
Isinyathelo sesi-4: Ngemva kokufaka amafutha, vumela izinwele zakho zome ngokwemvelo. Uma udinga ukuphuma ngokushesha, ungasebenzisa isomisi sezinwele ukuze womise ngobumnene izinwele zakho ukuze zome ngokushesha.
I-athikili engenhla yi-top 6 amafutha ezinwele ze-perm okuhle kakhulu, okudumile esikhathini samanje. Ngethemba, ngalesi sihloko, uzokhetha amafutha abalulekile afanele ezinwele zakho ezivunyelwe. Ngesikhathi esifanayo, bamba ukuthi ungasebenzisa kanjani amafutha abalulekile ezinwele ezigoqa kahle, unikeze umphumela wokunakekelwa kwezinwele ezinhle kakhulu!
Xem Thêm [Review] Tẩy da chết Rosette có tốt không? Giá bao nhiêu? | Muasalebang